China Ptfe Seals Hydraulic emeputa | DSH
Ahịrị mmiri, Piston Seals, Onye na-eweta mmanụ mkpuchi na-eweta ihe karịrị afọ 20
& Akara Ọkachamara
Polymer na-eyi akàrà ihe na-eguzogide ọgwụ, PTFE, polyurethane, roba, plastik na ihe mkpuchi ọzọ
Anyị na-etinye aka na nyocha, n'ichepụta, na ire nke akàrà maka azụmaahịa dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, akụrụngwa piston, akara mkpanaka, akara akara, akụrụngwa rotary, akụrụngwa mmanụ, akụrụngwa akpa akụrụngwa na akụrụngwa nke mmiri, akụrụngwa nke akụrụngwa nke injinịa. , akàrà mmanụ, akụrụngwa nke ụgbọ ala, akàrà kọmpat, na-eyi mpempe, mgbanaka ntuziaka, akàrà PTFE, akà mmiri mmiri, akpa PU, akụrụngwa wiper na ihe ndị ọzọ. Anyị ga-ekepụta akàrà ndị emechiri emechi nke ọma dabere na nyocha nke ndị ahịa ma ọ bụ ihe nlele.
SPG - Ihe eji egwu mmiri Piston Hydraulic nke na-egwupụta ihe
Ihe onyonyo a gosipụtara akàrà hydraulic nke DSH mepụtara, SPG-excavator kasị mma piston hydraulic piston seal steel. Lelee ugbu a!
Dịka ọkachamara na akara kọfị, y sọks ngwere, anyị nwere ike ịnye gị ụdị pistin niile, akara aka, akàrà mgbaaka, wdg. Lee ndị ọzọ!
Bronze Custom jupụtara PTFE Wear Strips Guide teepu Seal Ring Manufacturer
DSH bụ akara ndu na-eduzi, onye na-emepụta mgbanaka ntuziaka, ọ dị mma 100%, Lelee ugbu a!
PTA-Custom Elgiloy Helical opupu ike PTFE Akara
Guangdong DSH Seals Technology Co., Ltd (DSH), nnukwu ulo oru na-ejiko R
D, imepụta, na ire nke akàrà dị iche iche, na-enwe oke uru ahịa dị na asọmpi kpụ ọkụ taa.
Ruo ugbu a, DSH Seals emeela ụdị mkpuchi dị iche iche maka ndị ahịa, ụdị ndị a na-ahụkarị bụ akàrà mmanụ, akụrụngwa hydraulic, na PTFE nke ejiri ya na ụlọ ọrụ mmanụ, hydraulic na ụlọ ọrụ pneumatic, na igwe ndị ọzọ. N'ebe a, anyị ga-ewepụta ndụmọdụ ndị a gbasara akara nke ndị mmadụ ọhụrụ.
Ọrụ nke akara mmanụ bụ ịkwụsị ihe ọ bụla mmiri dị n'ime ya site na isiwepu oghere dị n'agbata ụlọ na ụlọ. A na-eji akụrụngwa hydraulic mechie oghere n'etiti ihe dị iche iche na cylinder hydraulic, tumadi na-adaba na ụzọ abụọ: ike na akàrà akara. PTFE akàrà na-egosipụta arụmọrụ dị oke mma na gburugburu ọgba aghara, oke okpomọkụ na nrụgide, kemịkalụ, na mmiri na-agba. A na-etinyere ụdị ụdị mkpuchi ndị ọzọ dị iche iche na ígwè ọrụ injin, ụgbọ ala, ọla, valvụ, kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
N'inwe afọ afọ, nka, na otu ndị ọrụ injinia, DSH Seals nwere ikike iji nye ndị ahịa usoro mmachi akara kachasị mma maka ngwa ha.
Raara onwe ha nye inyere ndị ahịa aka idozi nsogbu ha kacha sie ike.